Shirarkii wadatashiga Gobolada Puntland oo dadkii macnaha lahaa aan laga qeybgelin iyo fashilan Siyaasadeed oo Madaxda Puntland haysta Warbixintan ka akhriso. | WARARKA PUNTLAND
Home Wararkii Hore akhriso Shirarkii wadatashiga Gobolada Puntland oo dadkii macnaha lahaa aan laga qeybgelin iyo...
Shirarkii wadatashiga Gobolada Puntland oo dadkii macnaha lahaa aan laga qeybgelin iyo fashilan Siyaasadeed oo Madaxda Puntland haysta Warbixintan ka akhriso.
Waxaa manta lagu soo gabagabeeyey Deegaanada Puntland lix Magaalo oo ka mid ah Shirarkii wadatashiga heerka Qaran ee hiigsiga cusub ee doorashada 2016-ka habka la qaadan karo ee looga guurayo habkii hore ee 4.5-ka loo yaqaanay ee qabiilka ku dhisna.
Magaalooyinka Bosaaso, Qardho, Garoowe, Baran, Gaalkacyo iyo deegaanka Tuka-raq ee gobolka Sool ayaa dad gaaraya lix boqol si gooni gooni ah gobol walba Boqol ka mid ah loogu qabtay Magaalooyinkaas shirar wadatashi oo hiigsiga cusub aragtidooda ka dhiibanaya habka la qaadan karo ee doorasho Dowladda Federaalka Soomaaliya marka la gaaro Sanadka 2016-ka.
Maamulka Puntland ayaa deegaada waa weyn ee Puntland waxay aad ugu diideen inay ka qeyb qaataan shirarkaas wadatashiga ah Siayasiyiinta, waxgaradka magaca weyn ku leh iyo dhamaan dadka saameynta ku yeelan kara ee wax ku soo kordhinaya ama qumaatiga uga hadli kara doodaha halka loo soconayo 2016-ka marka la gaaro.
Magaalooyinka Bosaaso iyo Garoowe ayey xooga saartay Dowladda Puntland inay dad aan macno weyn laheyn degmooyinka soo qor qoraan oo ka reebaan dad badan oo magic iyo maamuus weyn ku dhex leh Bulshada dhexdeeda ama siyaasiyiin hore ha ahadeen ama ganacsato magac weyn leh ama bulshada rayidka ah ee madax banaan ha ahadeene.
Talaabadan ayaa dad badan oo dhaliila siyaasadda Madaxweyne Gaas ku tilmaamayaan mid lagu marin habaabinayo fashilanka dhanka Dowladda Federaalka kala soo kulantay, Siyaasiyana looga adkaaday Dowladda Puntland ee Gaas madaxweynaha ka yahay.
waxay Madaxda Puntland ku fashilmeen doodaha habka loo qondeynayo saamiyada aragtida ka bixinaysa wadatashiga hiigsiga doorashada 2016-ka oo Maamul Goboleedyada Galmudug iyo Puntland isku miisaan la saaray loona qoondeeyey tiro is le’eg.
Madaxda Dowladda Puntland halkii looga baahnaa doorkooda siyaasadeed inay qaataan oo dooda wax ka tala bixinaysaa ama aragtida laga soo ururinayaa lagu saleeyo Ergooyin 18-ka Gobol saami is le’eg oo aragtidooda ka dhiibta loo qoondeeyo halka saamiyo maamul Dowlad Goboleedyo aan isku miisaan aheyn lagu jaangooyey aragti arurunta Dadweynaha Soomaaliyeed ee shirarka madasha wadatashiga Qaran.
Dowladda Puntland waxay gabtay siyaasiyan inay hagto hababka la qaadanayo doorashooyinka soo socda 2016k-ka in ay ka turjumaan dhamaan Gobolada Dalka oo dhan ee 18-ka Gobol aragtida laga soo aruuriyey ay ahaato mid ku dhisan.
Hanaankaas oo noqda mid lagu saleeyo habka doorasho 2016-ka, dabadeedna laga soo aruuriyo bulshooyinka ku dhaqan 18-ka gobol habka loo gudbayo ee doorashada 2016-ka marka la gaaro.
Waxaa la orankaraa Dowladda Puntland Madaxdeeda waxay ku fashilmeen doorka ay ka ciyaarayaan hanaanka dowladda Federaalka, waxayna noqdeen kuwo looga xoog bato ama looga adkaado fadhiyada shirarka heer Qaran ee Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Fashilanka weyn waxa weeye qoondada Qaramada Midoobay, Beesha Caalamka iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ergooyinka loo gu talagalay shirarka wadatashiga ee aragti bixinta waxay goosteen madaxda Puntland iyagoo daboolaya fashilanka kaga yimi shirarkii Muqdisho in dhowr boqol oo ergooyin iska soo aruuriyaan oo codadkooda ku saleeyaan kuwo ka turjumaya miisaanka goboladooda iyo dadkooda ka wakiilka ah.
Haddaba, waxaa weli jira khataro badan oo kooxaha siyaasiyiinta iyo dadka Puntlandee aadka u daneeya inay sii ahaato mid awood weyn oo jirta ahaato Puntalnd tilmaamayaan in xaalad khatar ah jirto,taasoo salka ku haysa Siyaasad Xumada Maamulka
Madaxweyne Gaas iyo Xukuumadiisa oo runtii la oran karo waxaa Siyaasadooda caqabad hortaagan ku noqday heerka Federaalka Soomaaliya wiilal yar yar oo aan biseyl siyaasadeed laheyn, ugana xoog batay Fadhiyada Siyaasadeed ee heer Federaal.
This post has already been read 67124
Previous articleJaliyada Puntland Dalka Maraykanka ee Magaalada Minneapolis oo si weyn loogu soo dhoweyey Siyaasi Dr Yasiin Faarax Cartan.
Next articleGuddigii isku dhafka ee loo diray xuduuda oo qodobo soo saaray